Hlola i-Hamburg, Germany - World Tourism Portal
Hlola iHamburg, eJalimane
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eHamburg, eJalimane
Okufanele ukwenze eHamburg, Germany
Uhambo losuku kusuka eHamburg
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeHamburg
Bukela ividiyo ngeHamburg
Hlola i-Hamburg, enedumela elihle njengalokhu GermanyISango Lasemhlabeni. Kuyisikhumulo esikhulu kunazo zonke ezweni futhi esisesibili kunazo zonke eYurophu, yize sitholakala kumfula i-Elbe, amanye amakhilomitha e-100 ukusuka eNyakatho yolwandle. Futhi kungumuzi wesibili ngobukhulu waseJalimane onabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-1.8 kanti iGreater Hamburg Metropolitan Region inabantu abangaphezu kwezigidi ezine. IHamburg iyaziqhenya ngesikhundla sayo njenge “Dolobha lamahhala nelikaHanseatic” futhi ngaleyo ndlela yabelana ngesimo esifanayo nesifundazwe, yakha enye yezwe likahulumeni waseJalimane i-16 noma iBundesländer.
Elinye lamachweba abaluleke kakhulu eYurophu nasemhlabeni, iHamburg iyaziqhenya kakhulu ngesizinda sayo esinobuhle, esakha ingcebo yaleli dolobha emashumini eminyaka adlule. Ukusuka ku-1241 kuqhubeke, kwakuyilungu leHanseatic League, iqembu lezentengiso labephakathi nabaseNyakatho Yurophu. E-19th nasekuqaleni kwekhulu le-20th, izigidi zashiya i-Europe isiya ezweni elisha ngetheku laseHamburg. Namuhla, itheku lisesigabeni sesibili eYurophu nakweshumi nanye emhlabeni wonke. Ngenxa yalokho, omunye wemugqa wethegi kaHamburg yi “The Gateway to the World” (othathwe engubeni yempi yedolobha, obonisa udonga lomuzi omhlophe onesango futhi umqhele wemibhoshongo emithathu ingemuva elibomvu). IHamburg yaziwa njengezinye zezindawo ezicebe kakhulu e-European Union, enkampanini yaseBrussels nase London.
Itheku liyinhliziyo yedolobha, noma kunjalo, iHamburg nayo ingenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zabezindaba eJalimane. Ingxenye yamaphephandaba kanye nomagazini besizwe banezimpande zabo eHamburg. Futhi, okungaziwa ngisho nakubantu bendawo, iqiniso lokuthi, ngesinye sezitshalo zomhlangano wezindiza i-Airbus, iHamburg indawo enkulu yomkhakha wezindiza zomhlaba, ngemuva kweSeattle (USA) ne Toulouse (France).
Isizinda se-mercantile sibonisa ekwakhiweni kwedolobha. Isigodlo esiphawuleka kakhulu eHamburg yihholo ledolobha, elihlalisa iphalamende lesigungu kanye nesenethi. Isinye isigodlo somuzi sisedolobheni laseBergedorf. Ngaphandle kwalokhu, leli dolobha linezindawo ezimbalwa ezihehayo emapaki omphakathi futhi lisenezindawo ezinkulu ezinezindlu ezibizayo nezindawo ezigcwala izindlu. Lezi zindawo zokuhlala zaziyindlu yabathengisi nezinduna, zizungezwe uluhlaza obanzi. Izindawo ezinkulu zedolobha zacekelwa phansi lapho kuqubuka imibhikisho yempi ebhubhisa iMpi Yezwe II, ikakhulukazi itheku kanye nezindawo ezithile zokuhlala, kubulawa amashumi ezinkulungwane futhi kushiye abantu abangaphezu kwesigidi bengenamakhaya, nokho inani lomlando elondoloziwe njengoba abantu bebengafisa, njengamadolobha amaningi aseJalimane, iqalekisiwe ngezakhiwo ezesabekayo zempi yeposi namabhulokhi amancisha amahhovisi.
IHamburg isagcina isiko layo lokuba yidolobha elivulekile, nokho eliqondayo. Izakhamizi zaseHamburg, njengamaJalimane amaningi aseNyakatho, zingabonakala zigcinwe kahle ekuqaleni. Lapho sebazi ukuthi basebenzisana nobani, bazoba nemfudumalo futhi banobungane ngendlela ongafisa ngayo.
IHamburg inohlelo lokuthuthuka komphakathi olwenziwe kahle. Amabhasi ahamba ubusuku nemini. Ebusuku, insizakalo ekhethekile ye "Nachtbus" (ibhasi yasebusuku) ixhumanisa izifunda ezikude nendawo ephakathi nedolobha. Amabhasi ayahamba aze afike “eRathausmarkt”, eduze kwehholo ledolobha futhi asebenze ubusuku bonke. Izinsizakalo zezitimela ze-S-Bahn ne-U-Bahn (metro) (ezingaphansi komhlaba nangaphezulu) ziqala cishe nge-5AM zize zifike e-1AM edolobheni eliphakathi nendawo, kepha esikhathini esiningi ayikho insizakalo eyedlule 11PM ezifundeni ezikude. Ngezimpelasonto, isebenza ubusuku bonke.
Uhambo oluphelele lokuthenga luqala esiteshini esimaphakathi, ezansi ehholo ledolobha, bese kuthiwe ngePosttrasse elibheke eGaensemarkt isikwele bese ubuyela eJungfernstieg ngasohlangothini lwechibi le-Alter.
Indawo enkulu yokuthenga yaseHamburg yiMönckebergstraße enkabeni yedolobha. Thatha umgwaqo ongaphansi kwesitimela esikhulu, iRathaus (ihholo ledolobha), noma iMönckebergstraße. Bheka futhi i-Spitalerstraße eseceleni komgwaqo. Intshonalanga yedolobha ledolobha elibheke eGaensemarkt yizitolo ezibizayo ezinjengeHugo Boss.
Izitolo zivulwa kakhulu i-10AM yansuku zonke — i-8PM kanti ngoLwesine nangoLwesihlanu kuze kube yi10PM.
ISchanzenviertel nayo ithola kakhulu kulezi zinsuku zokuhlobisa izingqayizivele zama-design. Intsha ikakhulukazi ikuthokozela kakhulu ukuba lapha.
IHamburg inezitolo eziningi ezithi "Izandla Zesibili", kepha zingaphezulu kwesitolo. Kusafanele ukuvakashelwa.
Izitsha zaseHamburg zoqobo zinguBirnen, uBohnen und Speck (uSaxon Birn, uBohn un Speck, ubhontshisi ogijimela okuluhlaza ophekwe ngamapheya nokhonkolo), i-Aalsuppe (iSaxon Oolsupp ephansi, imvamisa yiphutha lokuthi lingamaJalimane "isobho le-eel" (Aal / Ool elihunyushwe ' i-eel '), noma kunjalo igama kungenzeka livela kwi-Low Saxon allns, okusho ukuthi "konke", "konke nekhishi kuyashona", hhayi ngempela i-eel. Namuhla i-eel ivame ukufakwa ukuze ihlangabezane nokulindelwe kokudla okungabekezeleleki.), Bratkartoffeln (Phansi I-Saxon Brootkartüffeln, izingcezu zamazambane athungwe epanini), i-Finkenwerder Scholle (I-Saxon Finkwarder Scholl ephansi), ipaneli elithosiwe), I-Pannfisch (inhlanzi ethosiwe epanini), iRote Grütze (I-Saxon Rode Grütt ephansi, uhlobo lwehlobo lasehlobo lasehlobo lwaseDenmark. enziwa kakhulu kusuka amajikijolo futhi ijwayele ukukhonzwa ngo-ukhilimu, njenge-Danish rødgrød med fløde) neLabskaus (ingxube yenkomo ebunjiwe, amazambane abunjiwe kanye ne-beetroot, umzala we-lapskaus yaseNorway kanye Liverpool'Scouse (ukudla), wonke amakhambi akhipha isidlo sakudala sebhodwe elilodwa esasiyisakhi esiyinhloko sokudla kwe-humdrum ejwayelekile olwandle olwandle).
I-Alsterwasser eHamburg (ireferensi yomfula wedolobha i-Alster enezidumbu ezimbili ezinjengechibi enkabeni yedolobha ngenxa yokushayisana), uhlobo, lokuhlangana kwezingxenye ezilinganayo zikabhiya kanye ne-carbonated lemonade (Zitronenlimonade), ulethisi wanezelelwa ubhiya.
IHamburg futhi iyikhaya likhekhe lokupheka eloshukela eliyinqaba elibizwa ngokuthi yiFranzbrötchen. Ibukeka njengengilazi ebunjiwe, iFranzbrötchen iyafana ngandlela thile nokulungiselela, kepha ifaka isinamoni nokugcwaliswa ushukela, imvamisa ngamagilebhisi noma ushukela onsundu. Leli gama lingahle libonise ukubukeka kwesiqalo esinjengombala - i-franz ibonakala njengokufinyeza kwe-französisch, okusho ukuthi "isiFulentshi", esizokwenza iFranzbrötchen ibe "umqulu waseFrance." Ukudla kwesifunda saseHamburg, iFranzbrötchen iba yindlala impela ngaphandle imingcele yomuzi; eduze neLunenburg (Lüneburg) itholakala kuphela njengeHamburger futhi ayitholakali eBremen nhlobo.
Imisuka yesinkwa ejwayelekile ivame ukuba mise okweqanda futhi yohlobo lwesinkwa samaFulentshi. Igama lendawo nguRundstück ("ucezu oluyindilinga" esikhundleni seGerman Brötchen, ifomu lesinciphisi le-Brot "isinkwa"), isihlobo Denmark's rundstykke. Eqinisweni, yize kungenjalo, izinkolelo zaseHamburg naseDenmark, ikakhulukazi Copenhagen kufana kakhulu. Lokhu kufaka phakathi ukwanda kusandwich okusobala-kobuso obuvulekile lwazo zonke izinhlobo, ikakhulukazi okufakwa ngenhlanzi ebhemayo noma ebunjiwe. I-hamburger yaseMelika ibonakala yakhula kusuka ku-Hamburg's Frikadelle: ipatty okuthosiwe (imvamisa inkulu futhi ibe mnene kunozakwabo wase Melika) eyenziwe ngenhlanganisela yenkomo enomhlabathi, isinkwa esidala, iqanda, u-anyanisi osikiwe, usawoti kanye nopelepele amazambane nemifino njenganoma iyiphi enye ingxenye yenyama, hhayi ngokuvamile kwi-bun. AmaHamburger amaningi abheka i-Frikadelle yawo kanye ne-hamburger yaseMelika ehlukile, cishe engahlobene. Isichazamazwi se-Oxford sichaze isidwaba seHamburger e-1802: ucezwana lwenyama obelubhemelwa futhi futhi, okusho ukuthi, ngokusho kwemithombo ethile, luvela eHamburg luya eMelika.
Ngokuvamile, iHamburg idolobha eliphephile.
Izindlela ezijwayelekile zokuqapha kufanele zibhekwe emaphepheni, ikakhulukazi ezimweni ezixineneyo kanye nasezindaweni zezivakashi nasezitolo.
Okunye ukunakekelwa okwengeziwe kufanele kuthathwe lapho uvakashelwa endaweni yakwaReepbanahn:
Amaphoyisa ajikeleza kakhulu le ndawo
Noma yiluphi uhlobo lwesikhali aluvunyelwe ngezikhathi zeqembu lezimpelasonto. Lokhu kufaka phakathi iziqukathi zengilazi. Ungahle ungalethi amabhodlela engilazi. Amabha noma amaklabhu ngeke akuvumele ukuphuma namabhodlela engilazi ngesandla futhi nezitolo ngeke zithengise ingilazi ngaleso sikhathi.
Abasebenza ngocansi banikezela ngezinsizakalo zabo eceleni kwendlela futhi bangakugcizelela kakhulu, baze babambelele kuwe futhi bazokulandela ngemuva kwezinyathelo ezimbalwa (baze bafika endaweni yomunye). Amaqembu abesilisa kuphela abhekiswe ikakhulukazi, inkampani yabesifazane izokunikeza 'ukuvikelwa' okuthile.
Ukuthenga kungazanywa kulesi simo.
Imigoqo yokudansa yetafula yaziwa ngokuxhaphaza ukukhokha ngezicelo ezingenacala ezivela emantombazaneni ngeziphuzo bese i-oda into ebiza kakhulu lapho kunesivumelwano esincane. Ukulungisa izindleko ze-500-Euro-noma-ngaphezulu kungafaka izinsongo zodlame, ngisho nohambo oluphoqiwe ku-ATM eliseduze nenkampani yakho igcinwe ngemuva.
Ungafuna ukubika izehlakalo ezinjengalezi emaphoyiseni futhi amathuba ukuthi azoyikholelwa indaba yakho.
Isiteshi sesitimela i-Reep)hn singahamba kahle impela ngezimpelasonto, ikakhulukazi ngezikhathi zasebusuku namaqembu abantu abadakiwe abangela izingxabano. Zama ukugwema ukuxhumana.
Gcina ibanga lakho kusuka ekubonisweni ngaphandle uma ufisa ukuhileleka: womabili amaqembu ashiyile kanye namaphoyisa aseHamburg ayaziwa ngokuphendula kwawo okukhulu ezimweni ezinjalo.
Amanzi ompompi ahlanzekile kakhulu futhi aphephile ukuwaphuza, ngisho nokulungiselela izingane izinsana ukudla.
Womabili amabhishi aseNyakatho nolwandle iBaltic Sea afinyeleleka kungakapheli ihora ngemoto, ujantshi noma ngebhasi.
ILübeck (Luebeck) - Idolobha linqamula uLwandle iBaltic. Idolobha elidala (i-Altstadt) lasinda kusukela ezikhathini zephakathi futhi liyingxenye yohlu Lamagugu Womhlaba wonke we-UNESCO. Cishe i-60 km enyakatho-mpumalanga yeHamburg, izitimela eziqondile zihamba zivela esiteshini esikhulu njalo ngehora.
Lüneburg - Idolobha eliseLower Saxony, cishe nge-50 km eningizimu-mpumalanga yeHamburg. NjengoLübeck, idolobha elidala laseLüneburg ligcinile ukubukeka kwephakathi kanye nezakhiwo ezindala nemigwaqo emincane. Leli dolobhana likhona eLüneburger Heide enhle. ISouth of Hamburg, izitimela eziqondile zishiya esiteshini esikhulu njalo ngehora.
IHelgoland - isiqhingi saseJalimane esiseNyakatho. Kufinyeleleka ngesikebhe esivela eSt Pauli Landungsbrücken.
I-Altes Land - Lesi sifunda yindawo enkulu kunazo zonke ehlangene nezithelo ezixhunyiwe eCentral Europe futhi esenyakatho kakhulu emhlabeni. I-Altes Land indawo yemashi eningizimu yomfula i-Elbe eHamburg kanye neLower Saxony ezungeze amadolobhana amadala eStade, Buxtehude, neJork. Isici esibonakalayo yizinkundla zamapulazi ezihlotshiswe ngokucebile ngamasango awo amahle.
I-Ahrensburg - I-Ahrensburg iyidolobha elingasenyakatho-mpumalanga yeHamburg, esifundeni saseStormarn. Ukubonakala kwayo okugqamile yinqaba yaseRenaissance esukela nge1595. I-Ahrensburg itholakala kalula ngemoto nesitimela (iHamburg izithuthi zomphakathi).
I-Sankt Peter-Ording - Indawo yabavakashi baseJalimane eyaziwa kakhulu olwandle. Ifaka ulwandle olubanzi lwendlu kanye nezindlu ezakhiwe.
U-Kiel - Ukuheha izivakashi okuyinhloko kwe-Kiel "i-Kieler Woche" (Isonto le-Kiel) ekupheleni kukaJuni, umcimbi omkhulu wokuhamba ngomkhumbi emhlabeni kanye nolunye Germanyimikhosi emikhulu kunayo yonke.